Yikuphi okungcono TV namabhayisikobho zigeleza service? - Izindaba Rule
Yikuphi okungcono TV namabhayisikobho zigeleza service?
We qhathanisa Netflix, Amazon, Sky, Wuki, TalkTalk TV(Blinkbox), -Google Play and iTunes
Lesi sihloko osesikhundleni “Yikuphi okungcono TV namabhayisikobho zigeleza service?” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesibili 2nd February 2016 07.00 UTC
Izinsuku edinga i dish isithombe esithathwe phezulu sendawo noma ngesiphuphutheki ukuze sate TV yakho kanye nezidingo movie-ukubukela kuthiwa kade laphela. Fast-broadband ukuxhumeka ziye yavula indlela entsha lonke kokuthola okuqukethwe, zidala plethora services Ukusakaza. Kodwa sasingazi ukuthi yiyiphi iyona engcono?
Akuwona wonke amasevisi zigeleza zidalwe ngokulinganayo. Kuningi babe imitapo ezedlulayo, kodwa abaningi ziyehluka ukushayelwa intengo, izinga nokutholakala on owasebenzisayo.
Netflix enye nqampuna umhlabeleli nemihosha yasakazwa idivayisi ukweseka. Photograph: Elise Amendola / AP
Price: £ 5.99 – £ 8.99 ngenyanga
Mhlawumbe ibutho kwabazabalazayo nangu Netflix, okuyinto okwaqala njengempi yenkolo US DVD Rental aqine futhi morphed iwenze umsebenzi yokusakaza global.
Inani lisukela £ 6 kuya £ 9 esekelwe zingaki izikrini ufuna ukubukela ngesikhathi esifanayo, kanye nesinqumo emfudlaneni, okuyinto hits 4K ekupheleni phezulu njengoba nje internet wakho uxhumano kanye namadivayisi kungaba uyiphatha.
amandla Netflix sika cross-platform ukwesekwa kanye nokusakaza yayo quality, okuyinto kude obudlula amanye amasevisi kakhulu. Kukhona uhlelo lokusebenza noma indlela ozothutha ususa Netflix on pretty okuningi kunoma iyiphi idivayisi etholakalayo, nakuba abanye nomabonakude smart asebekhulile kwakuqabukela kwenzekile. Netflix is ​​a isakaza service kuphela, Nokho, okusho awukwazi thwebula imibukiso noma amabhayisikobho wokubuka okungaxhunyiwe ku-intanethi.
ikhathalogi okuqukethwe yenkampani kuyahlukana ngokuya kwezwe. In the UK, incane nge 3,000 amabhayisikobho ezikhona ngokusho idatha kusuka zigeleza service search Unogs. Netflix has a big igama imibukiso emisha TV ambalwa ukusekela ngokulondoloza kuphela by imibukiso amadala noma esingaphansi ethandwa. Amabhayisikobho zivame ukuvela ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ayatholakala kwi pay-TV. umtapo Its US lisabalele nokunye okuningi.
Netflix-noma okukhethekile zethelevishini, kuhlanganise House of Cards, Jessica Jones, Orange New Black, zikufakazela popular.
Isinqumo: best cross-platform ukwesekwa kanye nokusakaza quality, umtapo in the UK incane
Amazon Prime Isiqophi Instant
Ex-Top Gear abethuli bayoba entsha car show on Amazon Instant Isiqophi iyatholakala nge Prime. Photograph: Amazon / PA
Price: £ 6 inyanga noma ingxenye Amazon £ 79 ngonyaka Prime okubhaliselwe
video yokusakaza service Amazon futhi kuyahlukana ngokuya kwezwe. umtapo Its ihlukile UK kuqhathaniswa US, ngokwesibonelo, kodwa ihlanganisa subscription service nge movie ne-TV show kuqashwa noma isevisi ukuthenga.
Kulabo abakholelwa inkonzo Amazon Prime, abasebenzisi uthole ukufinyelela isethi engaphansi movie ne-TV ukuthi ngokuvamile kuhlanganisa umbhangqwana wokuqala kwezinkathi zonyaka-TV. Le nezinkathi okulandelayo kuyizidingo ngaleso sikhathi for imali eyengeziwe. Ukukhetha Its ibhayisikobho okhethekile eziningana Ukusakaza, kodwa njengezinye Netflix ngokuvamile zithatha isikhathi ukuvela. Umtapo UK imibukiso othandwayo ihlukile okuqukethwe, kodwa emadanisekako ubukhulu Netflix. Highlights zihlanganisa Mr Robot, Alpha House esobala.
Amazon isekela isakaza nge aduduze eziningana, Fire TV and tablet amadivaysi ayo, amadivaysi iOS kanye in-browser ukweseka. Zethelevishini namabhayisikobho zingagcinwa for wokubuka okungaxhunyiwe ku-inthanethi iOS. Ukusekela amadivayisi Android ungenziwanga Google umpofu, ezidinga inqubo multi-step ukufaka uhlelo lokusebenza Amazon Isiqophi ngokusebenzisa esitolo Amazon Underground, okumele ukulandwa kusuka website Amazon njengoba ayitholakali ku-Google Play isitolo.
Ikhwalithi yokusakaza siyefana Netflix futhi uyakwelula-4K Ngomlilo ibhokisi Amazon TV.
Isinqumo: ehloniphekile yokusakaza okubhaliselwe, namakhefu akhokhelwayo-olungeziwe ongakhetha okwenza kube inkonzo kakhulu olunzulu
Sky Manje TV
Game of Thrones ingenye imibukiso Sky-okukhethekile angabukelwa kuphela bukhoma nge Manje TV. Photograph: Alamy
Price: Ama-Movie £ 9.99 (inyanga), Ezokuzijabulisa £ 6.99 (inyanga), Ezemidlalo £ 6.99 (usuku), £ 10.99 (ngesonto), inyanga (£ 31,99)
Sky sika Manje TV selihlukene laba amasevisi ezintathu ezihlukene: Ezemidlalo, Ezokuzijabulisa nama-movie. Ngamunye ikunika zigeleza ukufinyelela iziteshi Sky bukhoma, on-funa lokucuketfwe kanye catchup.
Ezokuzijabulisa ihlanganisa iziteshi Sky sika bendabuko nabanye ukuthi awatholakali kwi Freeview, kanye iqoqo kahle esikhulu ibhokisi setha zethelevishini, kuhlanganise zamanje hit TV. Amabhayisikobho kuhlanganisa Sky amabhayisikobho nezinhlelo ze-kalukhuni 1,000 amabhayisikobho on-funa wokubuka, kuhlanganise eziningi ezibonakala kahle ngaphambi kokuba benze kwamanye amasevisi okubhaliselwe. Ezemidlalo inikeza ukufinyelela bukhoma iziteshi eziyisikhombisa Sky Sports.
I-TV ne-movie amaphakheji babe uhla elikhulu kunawo wonke imibukiso zamanje kanye ezintsha namafilimu, kodwa readily kokuphelelwa yisikhathi kusukela service, kamuva kokuvela nabanye abahlinzeki yokusakaza ezifana Netflix. Manje inzuzo TV kuwukuthola kuqala for subscription service, Ngokuvamile amasonto kuphela emva kokuba itholakale ukuze ithengwe on Blu-ray noma DVD.
Manje ezemidlalo umnikelo TV cishe eyingqayizivele ekuhlinzekeni bukhoma yokusakaza ukufinyelela kwezemidlalo premium, kuphela BT Sport ukuhlinzeka efanayo.
Izinga Ukusakaza, ngenkathi HD, akamuhle enhle njengoba Netflix noma Amazon kanye ayisekeli 4K Ukusakaza. Kuyinto sobala ikakhulukazi kwezemidlalo, njengoba izinga luhlaka kuyinto ephawulekayo ampofu kuka ukusakaza yendabuko.
Ukwesekwa Sky sika kwamadivaysi kuqhathaniswa omuhle, nge Android ehloniphekile, iOS nokududuza zokusebenza, support for Roku, ezinye nomabonakude LG smart and computer i-Silverlight Microsoft. Kodwa ukwesekwa yayo akamuhle ezihlukene njengesi Netflix.
Isinqumo: ezibizayo, kodwa okuqukethwe kwakho noma abakwazi ukuthola noma uthola indlela phambi kwamanye amasevisi we-okubhaliselwe
Entertainment **** Ama-movie **** Ezemidlalo ****
Sky Isitolo website okubonisa Owesilisa Uncle. Photograph: Sky Isitolo
Price: intela 99p, uthenge £ 5.99
Kanye Manje TV and Sky Go, elitholakala kuphela njengengxenye yokubhalisa satellite, Sky Ubuye ehlukile eziqashisayo movie nokuthenga service esibizwa Sky Isitolo. Kuba nje-movie, kodwa kuhlanganisa mayelana 1,000 movie ne lakhetsiwe okuqinile evelayo emhlabeni ngesikhathi esifanayo njengoba amabhayisikobho olukhishwe Blu-ray kanye DVD.
Amabhayisikobho wathenga nge Sky Isitolo ukunikeza ukufinyelela komsebenzisi ukusakaza HD of the movie, plus a DVD wathumela emzini wabo e-post. Okuqashwayo SD kuphela futhi uqale at 99p. Amabhayisikobho ingabukwa ngokusebenzisa ezihlukahlukene amaphilisi, amakhompyutha nokusakaza namabhokisi, kodwa izinga lwehluka. The esiphezulu 1080i lesinqumo HD video angabukelwa kuphela nge Sky BakaJehova + HD amabhokisi, kusale YouView, ngonyaka, Manje amabhokisi TV kanye amaphilisi kwesobunxele kuya 720p. Macs kanye Windows Vista noma amakhompyutha amadala ungabuka kuphela okuqukethwe SD.
Isinqumo: kuhle movie ofuna ukuthenga ilebula lokumaka nge DVD, kodwa kuyinto izinga ngokuvamile lingaphansi kunalokhu izimbangi kwamanye amadivayisi
TalkTalkTV – phambilini obuwaziwa BlinkBox – website okubonisa Everest movie Photograph: TalkTalkTV
Price: kusukela £ 3,49
Ebibizwa Blinkbox, TalkTalk TV esitolo is a pay-per-umbono TV ne-movie wokuqasha nokuthenga digital esitolo. Ngokungafani amanye, akukho subscription inketho.
Umtapo of movies amasha nezinhlelo ze-TV kuyinto impela ebanzi, ne-TV zakamuva njenge Agents Marvel sika Isihlangu evele ngemuva kwamahora angu-ngokuvamile kuphela senza on TV.
Okuqashiwe noma okuqukethwe uthenge ingabukwa kwi-Android, iOS kanye Windows amaphilisi kanye Smartphones, Chromecast ye-Google, amakhompyutha, aduduze ngaphandle the PS4, umbhangqwana Blu-ray abadlali kanye nedlanzana nomabonakude smart. I smartphone and tablet zokusebenza Ungalanda futhi okuqukethwe for wokubuka okungaxhunyiwe ku-intanethi.
Abasebenzisi zithole ithuba zigeleza ekuchazweni okujwayelekile noma e HD sokuthola imali, nakuba kuba kuphela 720p kanye nomsindo stereo, hhayi umsindo ozungezayo Dolby Digital Plus.
Isinqumo: umtapo wezincwadi esiqinile amasha ethandwa ad-hoc nokuqashwa kanye nokuthengwa hle multi-platform ukwesekwa, kodwa akukho 5.1 noma 1080p
Wuaki TV website okubonisa Ant-Man ongakhetha ukuthenga noma intela. Photograph: Wuaki TV
Price: eziqashisayo kusukela £ 1,89, ukuthenga kusuka £ 4,99
Enye pay-njengoba-wena-iwashi esitolo, Wuaki kusekelwe eSpain is run by Japanese ngokuqinile iimfesi Rakuten futhi unikeza iqoqo ngendlela efanayo muva-ezikhishwe zethelevishini namabhayisikobho ukuqashwa noma ukuthenga ezinye izinsizakalo Lweqoqo.
Ukwesekwa yedivayisi siqinile, esehlanganise uhla efanayo kwamadivaysi njengoba TalkTalk TV esitolo, kuhlanganise Chromecast, Xbox, iOS, Android EE TV, amakhompyutha kanye nomabonakude smart abanye, ne ezithé esobala kokuba lo PS3 and 4.
Ungalanda okuqukethwe for wokubuka okungaxhunyiwe ku-intanethi ezibhebheni kanye smartphone, kodwa HD okuqukethwe ayikwazi ukudlalwa nge website, smartphone noma ithebulethi zokusebenza. Usakaza nge Chromecast kwaba edwaleni futhi wabheka kuhle, kodwa kwaba kutholakala kuphela stereo sound.
Kukhona Ukukhetha okuqukethwe atholakale kusuka Viki, okuyinto ayekubiza ngokuthi "TV zomhlaba ezivela Asia nokuningi", futhi abambalwa amabhayisikobho free ezifana nalezi: NgokukaJohane Travolta The Boy in the Bubble Plastic.
Isinqumo: a option ehloniphekile ngokuqasha amabhayisikobho esanda kukhululwa futhi TV uma ungenalo cinema ekhaya wamisa
Google Play Movies kuyingxenye ye-Google Play Isitolo, kuyatholakala kuwo wonke amakhompyutha, amadivaysi futhi abanye nomabonakude smart kanye namabhokisi usetha-phezulu. Photograph: –/AFP / Getty Images
Price: kusukela £ 1,89
esitolo movie ne-TV ye-Google yakhiwe singene esitolo esifanayo lokusebenza layo, umculo nezincwadi Android namanye amadivayisi. Play movie ne-TV usebenza ngendlela efanayo ukuze TalkTalk TV esitolo, namakhefu akhokhelwayo-njengoba-wena ubukele izinhlinzeko ukuqashwa noma ukuthenga.
It has a umtapo efanayo, nge omningi kakhulu kusesimweni movie ne-TV evele ngaphambi kwamanye amasevisi. It has ukuhlanganiswa eziqinile ibe Android, njengoba ungase ulindele, kodwa futhi isekela Roku amabhokisi, amakhompyutha, Chromecast, Android TV, Apple iPad ne-iPhone nabanye.
Usakaza mfanelo enhle kakhulu kuze kufinyelele 1080p, kuyilapho ama-movie nemidlalo ye-TV ingalandwa ku Smartphones kanye amaphilisi wokubuka okungaxhunyiwe ku-intanethi.
Isinqumo: eshibhile, kanye 5.1 umsindo in quality engcono kunezinye izimbangi pay-per-umbono kodwa nge support for amadivayisi ambalwa
iTunes amabhayisikobho lidlalwa emuva ku i-Apple TV. Photograph: I-Apula
Price: kusukela £ 1,89 (SD), £ 2.49 (HD)
Apple abezindaba esitolo afakwa iTunes yayingenye yezindawo zokuqala atholakalayo futhi namanje yezindlela ezingcono kakhulu izinkomo. ze-TV namabhayisikobho zifika cishe ngesikhathi esifanayo njengoba Google Play kanye nezinye izinsizakalo pay-per-view. Ayikho iminikelo okubhaliselwe, kodwa ungakwazi ukuthenga noma ukuqasha iningi ukukhishwa zakamuva kanye Izinto emdala.
ukwesekwa Kudivayisi kukhawulwe Apple and software, kuhlanganise iPad, iPhone, Apple TV nama-computer nge iTunes efakwe. Zethelevishini namabhayisikobho kungenziwa ilandelwe ukubukwa okungaxhunyiwe ku-intanethi, futhi zitholakala 1080p nge Dolby 5.1 umsindo ozungezayo.
Isinqumo: elikhulu eliphezulu Thenga kanye nomtapo kuqashwa kodwa nge limited (Apple kuphela) ukweseka idivayisi
Siyakwamukela ku kwemvelo yesithupha ithelevishini: indawo-ukuguquguquka
35442	2 Amazon Prime Isiqophi Instant, Amazon.com, I-Apula, Isigaba, Broadband, Google, Internet, iTunes, Media, Netflix, Izibuyekezo, Samuel Gibbs, Sky plc, TalkTalk Telecom, Technology, Ithelevishini, umkhakha Television, Isiqophi iyafuneka
← Ungaqalisa Windows 95 Ngaphakathi isiphequluli sakho Manje [PCWorld] Marijuana ingase ilimaze Memory Verbal →